osXFCE a MacOS sitere n'ike mmụọ nsọ isiokwu maka XFCE dabere na aak-flatabulous | Site na Linux
osXFCE a MacOS sitere n'ike mmụọ nsọ isiokwu maka XFCE dabere na arc-flatabulous
Luigys toro | | Ọdịdị / Nhazi
Anyị na-anwale ma na-anụ ụtọ Linux gburugburu, oge a anyị nwere ọ joyụ nke ịnwale otu n'ime ọtụtụ MacOS sitere n'ike mmụọ nsọ gburugburu O mezuru nke ọma. osXFCE nke bụ isiokwu a họọrọ, na-ejikwa hazie arc-flatabulous iji nweta ihe nhicha dị ọcha ma kwadebekwa ya nnukwu nhazi maka plank nke ahụ ga-enye anyị ihe oyiyi ọhụrụ Ebe obibi desktọọpụ XFCE.
1 Kedu ihe bụ osXFCE?
2 Etu esi etinye osXFCE
Kedu ihe bụ osXFCE?
osXFCE bụ a isiokwu maka XFCE sitere n'ike mmụọ nsọ MacOS, e mere site Ian McCausland kwuru jiri isiokwu ah u mee ihe arc flatabulous ma gwakọta ha na njedebe gị. Edegharịrị isiokwu izizi iji nwee njikọ dị mma na ya vala-panel-ngwa na XFCE.
Isiokwu a na-abịakwa na-arụ ọrụ na nhazi plank nke kwekọrọ n'ụdị ahụ n'ụzọ zuru oke, nke ga-eme ka ị jikọta ihe eserese abụọ nke gburugburu desktọọpụ gị n'ụzọ dị mma, na-arụpụta ezigbo nsonaazụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu, ọ bụghị isiokwu na-agbanwe agbanwe na ngwụcha ya ma ọ bụrụ na ọ bụ ngosipụta kwesịrị ntụkwasị obi nke ihe MacOS na-enye anyị, nke ndị ọrụ chọrọ ịnụ ụtọ desktọọpụ yiri nke ezinụlọ Manzanita kwesịrị inye onwe ha ma nwalee osXFCE.
Na mgbakwunye, isiokwu a gụnyere menu ndọpụta dị mma, njikwa windo, mmetụta nkuku gbara gburugburu, mmetụta na ngwa gtk na ntọala ndị ọzọ.
Etu esi etinye osXFCE
Anyị nwere ike iwunye isiokwu a n'ụzọ a na-emebu, n'ihe banyere manjaro xfce usoro ntinye m sooro bụ ndị a:
Mmepụta oyiri isiokwu repository
Detuo na ndekọ isiokwu
Detuo nhazi osXFCE plank na directory ngwa
Họrọ kwekọrọ ekwekọ isiokwu si dị, na-agba ọsọ plank na-amalite na-enwe.
Nwere olileanya na isiokwu a na-enye gị nhọrọ nhọrọ mgbakwunye maka gburugburu desktọọpụ XFCE gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » osXFCE a MacOS sitere n'ike mmụọ nsọ isiokwu maka XFCE dabere na arc-flatabulous
Ọ bụ ịrụ ọrụ nke ọma iji ogwe nke abụọ karịa Plank na XFCE.
Kedu ka m si agba plank? Akọwapụtaghị ya
Zaghachi Federico Martín Lara
Mbụ ị ga-etinyerịrị plank, na Linux Linux ma nweta ya dị mfe dị ka ime iwu a bụ yaourt -S plank, na ọzọ distros ọ bụ na ụlọ ọrụ gọọmentị, wee si na menu (na ngwa mkpirisi ngwa) ị na-eme plank
Ezigbo ihe ederede… ..
Zaghachi Jim Whitehurst
hey enyi m gbalịrị ya na debian 9 na ihe niile na-arụ ọrụ, naanị otu n'ime ogwe 2 m na-acha ọcha, ị nwere echiche ọ bụla etu esi edozi ya?
Ọ bụrụ na ịmee otu ahụ, ọ naghị amalite na akpaghị aka. Ọzọkwa, ị nwere ike ime ka ọ na-agba ọsọ na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na ị hazie ya site na nhazi center. Na mmalite na nnọkọ nhọrọ tinye ya dị ka mmemme nke na-amalite na mmalite
Enwere m nsogbu na isiokwu ahụ, agbalịrị m ya na debian 9 xfce na manjaro xfce na panel anaghị agbanwe na-acha ọcha, ọ na-anọ oji, malitegharia na ihe ọ bụla, ọ nwere onye nwere echiche otu esi emezi nke ahụ?
Kedu akara ngosi ha bụ?
Kedụ ka ị ga-esi nweta menus Chromiun na paneel ????
Mmadụ nwere ike ịkọwa otu esi ewepụ ihe a. Enweghị m mmasị na ya na enweghị agba agba mgbe m mechara ihe niile.
Ọ dabere na folda ị rụnyere ya, ọ bụrụ na ị gbasoro nkuzi ahụ (usr / share / themes), tinye dị ka mgbọrọgwụ na adreesị ahụ ma jiri iwu: rm -r "aha nchekwa", (na-enweghị isi okwu)
PAM, NIS, LDAP, Kerberos, DS na Samba 4 AD-DC - SMB Netwọk